ပြည်ပသို့ ကြက်သွန်နီ တင်ပို့မှု အလားလာ ကောင်းသော်လည်း ဈေးနှုန်း ကျဆင်းနေ
Post byသုသု(AMIA) on Monday, April 22,2019
လက်ရှိ ဈေးကွက်အတွင်း ကြက်သွန် တစ်ပိဿာလျှင် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ကျပ်ကြား ဈေးနှုန်းရရှိနေသည်။ ဓာတ်ပုံ- မှိုင်းဝေ(AMIA)
၂၀၁၉ ခုနှစ် သုံးလအတွင်း(ဇန်န၀ါရီမှ မတ်လ) အထိ ပြည်ပသို့ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် ၂၀,၀၀၀ ခန့် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းကျော် ရရှိထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
“ ပိုတင်ပို့ လာနိုင်ပြောနိုင်ပေမယ့် ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနဲ့ ယှဉ်ရင်ဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းနေတယ်။ အခု လည်း ပြည်တွင်းဈေးက လှောင်လက်ကြိုက်ဈေးပဲ။ တစ်ပိ၁သာ ၅၀၀ ကျပ်ဈေးက ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်အောက် ကျဆင်းနေတယ်။ တရုတ်ဘက်၊ အိန္ဒိယဘက်ကို နယ်စပ်လမ်းကြောင်းကနေ သွားနေတယ်။ ဒါကလည်း ပြည် တွင်းမှာ ပိုလျှံနေတော့ ပြည်ပ ပိုမိုပို့ဖို့ ကြိုးပမ်းနိုင်မှ စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေ ဈေးကောင်းလာမှာ ဖြစ်တယ် ” ဟု မန္တလေးရှိ ၀င်းမြပွဲရုံ ဦးမြ၀င်းက ပြောသည်။
ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရာတွင်လည်း ပုတ်ကုန်သီးနှံ အမျိုးအစားဖြစ်၍ အအေးခန်း ကွန်တိန်နာများကို မသုံးနိုင် သဖြင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ သဘာဝအတိုင်း သိုလှောင်ရာ တွင် ခြောက်လခန့်အတွင်း လေလွင့်မှုသည် ၂၀ မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အထိပင် ရှိလာကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရှိ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီ် (ဂျွန်ကြီး) တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ကြား၊ ကြက်သွန်နီ် (ဂျွန်လတ်) တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၅၀ မှ ၄၀၀ ကြား၊ ကြက်သွန်နီ် (ဂျွန်သေး) တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၀၀ ခန့်သာ ဈေး နှုန်း ရရှိနေခြင်းကြောင့် ပွဲရုံများသို့ လာရောက်ရောင်းချသည့် တောင်သူများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခ အနည်း ငယ် ပြန်ပေးကြောင်း သိရသည်။
“ ကြက်သွန်က ထားသိုဖို့လည်း မလွယ်ဘူး။ ပြီးတော့ အဝယ်ရှိပြီ ဆိုရင်ချက်ချင်း ဝုန်းဒိုင်းဆို ဈေးအများကြီး ပြန်တက်နိုင်တယ်။ တက်ရင်လည်း မြန်သလို ကျရင်လည်းမြန် ပြီးတော့ ကုန်စိမ်းဆန်တယ်။ လက်ရှိမှာတော့ စိုက်ပျိုးစရိတ်အောက် ရောက်နေတယ်။ တစ်ပိဿာကို ကျပ် ၃၅၀ ကနေ ၄၀၀ လောက်ရှိတယ် ” ဟု မြန်မာ နိုင်ငံ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီနှင့် စားဖိုဆောင်သီးနှံ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဟန်က ပြောသည်။
၂၀၁၈- ၁၉ ဘဏ္ဍာခုနှစ် ကြားကာလအတွင်း တန်ချိန် ၃၃,၀၀၀ ကျော် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တန်ချိန် ၂၂,၀၀၀ ကျော် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းကျော် ၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် တန်ချိန် ၆ သောင်းကျော် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၈၊ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တန်ချိန် ၄၇,၀၀၀ ကျော် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကျော် အသီးသီး ဈေးရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြက်သွန်နီ အဓိက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၃ ခု သာဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် မြင်းခြံခရိုင်တွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၉ ခုနွစ် သုံးလအတြင်း(ဇန္န၀ါရီမွ မတ္လ) အထျိပည္ပသို့ ကြက်သြန္နီ တန္ခ်ိန် ၂၀,၀၀၀ ခန့် အေမရိ ကန်ဒေါ်လာ ၄ သန်းကေ်ာ် ရရွိထားကြောင်း စီးပြားရေးနွင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမွ သိရသည်။
“ ပိုတင္ပို့ လာနိုင်ျေပာနိုင်ပေမယ့် ၂၀၁၆ - ၁၇ ဘဏ္ဍာနွစ္ကနဲ့ ယွဉ်ရင်စေ်းနှုန်းတြေ က်ဆင်းနေတယ်။ အခု လည်ျးပည္တငြ်းစေ်းက လွောင္လက်ကြိုက်စေ်းပဲ။ တစ္ပိ၁သာ ၅၀၀ က်ပ်စေ်းက ထုတ္လုပ္မှု စရိတ်အောက် က်ဆင်းနေတယ်။ တရုတ္ဘက်၊ အိန္ဒိယဘက္ကို နယ္စပ္လမ်းကြောင်းကေန သြားနေတယ်။ ဒါကလည်ျးပည် တြင်းမွာ ပိုလွ်ံနေတျာ့ပည္ပ ပိုမိုပို့ဖို့ ကြိုးပမ်းနိုင္မွ စိုက္ပ်ိုးတောင်သူတြေ စေ်းကောင်းလာမျွာဖစ္တယ် ” ဟု မန္တေလးရွိ ၀င်ျးမပြဲရုံ ဦျးမ၀င်းကျေပာသည်။
ျပည္ပသို့ တင္ပို့ရာတြင္လည်း ပုတ္ကုန်သီးနွံ အမ်ိုးအစာျးဖစ်၍ အေအးခန်း ကြန္တိန္နာမ်ားကို မသုံးနိုင် သျဖင့် ပင္လယ်ရေကြာင်းမွ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ် တင္ပို့နိုင်ျခင်း မရွိကြောင်း၊ သဘာဝအတိုင်း သိုလွောင်ရာ တြင်ျေခာက္လခန့်အတြင်း လေလြင့်မှုသည် ၂၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္နှုန်းခန့် အထိပင် ရွိလာကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရွိ ကြက်သြန္နီ ကြက်သြန္နီ် (ဂျန်ြကြီး) တစ္ပိဿာလ်ွင် က်ပ် ၄၀၀ မွ ၅၀၀ ကြား၊ ကြက်သြန္နီ် (ဂျန္လြတ်) တစ္ပိဿာလ်ွင် က်ပ် ၃၅၀ မွ ၄၀၀ ကြား၊ ကြက်သြန္နီ် (ဂျန်ြသေး) တစ္ပိဿာလ်ွင် က်ပ် ၃၀၀ ခန့်သာ စေ်း နှုန်း ရရွိနျေခင်းကြောင့် ပြဲရုံမ်ားသို့ လာရောက်ရောင်းခ်သည့် တောင်သူမ်ားကို သယ်ယူပို့ဆောင္ခ အနည်း ငယ်ျပန်ပေးကြောင်း သိရသည်။
“ ကြက်သြန္က ထားသိုဖို့လည်း မလြယ္ဘူး။ ပြီးတော့ အဝယ်ရွိပြီ ဆိုရင္ခ်က္ခ်င်း ဝုန်းဒိုင်းဆို ဈေးအမ်ားကြီျးပန္တက္နိုင္တယ်။ တက်ရင္လည်ျးမန်သလို က်ရင္လည်ျးမန် ပြီးတော့ ကုန္စိမ်းဆန္တယ်။ လက်ရွိမွာတော့ စိုက္ပ်ိုးစရိတ်အောက် ရောက်နေတယ်။ တစ္ပိဿာကို က်ပ် ၃၅၀ ကေန ၄၀၀ လောက်ရွိတယ် ” ဟျုမန္မာ နိုင်ငံ ကြက်သြန်ျဖူ ကြက်သြန္နီနွင့် စားဖိုဆောင်သီးနွံ စိုက္ပ်ိုး ထုတ္လုပ္တင္ပို့ ရောင်းခ်သူမ်ားအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဟန္ကျေပာသည်။
၂၀၁၈- ၁၉ ဘဏ္ဍာခုနွစ် ကြားကာလအတြင်း တန္ခ်ိန် ၃၃,၀၀၀ ကေ်ာ် အေမရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကေ်ာ်၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနွစ္တြင် တန္ခ်ိန် ၂၂,၀၀၀ ကေ်ာ် အေမရိကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းကေ်ာ် ၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာနွစ် တြင် တန္ခ်ိန် ၆ သောင်းကေ်ာ် တစ္တန္လ်ွင် အေမရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၈၊ ၂၀၁၆- ၁၇ ဘဏ္ဍာနွစ္တြင် တန္ခ်ိန် ၄၇,၀၀၀ ကေ်ာ် အေမရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကေ်ာ် အသီးသီး စေ်းရရွိခဲ့သည်။
ျမန္မာနိုင်ငံတြင် ကြက်သြန္နီ အဓိက စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္မှုတြင် မန္တေလး၊ မေကြးနွင့် စစ္ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၃ ခု သျာဖစ်ပြီး မန္တေလးတိုင်း ဒေသကြီးတြင်ျမင်းခြံခရိုင္တြင် အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိုးလ်က်ရွိသည်။
I must point out my admiration for your kind-heartedness in support of those who absolutely need help on this matter. Your special commitment to getting the message all-around had become extraordinarily interesting and have all the time empowered folks just like me to realize their targets. Your new helpful report signifies muchaperson like me and substantially more to my fellow workers. Best wishes; from each one of us. polo ralph lauren [url=http://www.polosralphlaurenuk.com]polo ralph lauren[/url]
by qgrnkvu@gmail.com at June 08 2019
I simply wanted to write downaquick remark so as to appreciate you for the magnificent techniques you are showing on this site. My rather long internet lookup has at the end of the day been rewarded with reliable know-how to talk about with my friends and classmates. I 'd suppose that we website visitors are truly fortunate to dwell inawonderful website with many awesome professionals with interesting concepts. I feel somewhat lucky to have discovered the website and look forward to really more amazing minutes reading here. Thanks once more for everything. stephen curry shoes
by opiquuprogs@gmail.com at June 07 2019
A lot of thanks for all of your efforts on this blog. My mom loves participating in research and it is obvious why. I learn all concerning the powerful mode you provide reliable steps by means of the web blog and therefore cause response from other individuals on the content and our own simple princess is actually discovering so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been conductingapretty cool job. ultra boost
by azftgqrccws@gmail.com at June 05 2019
I truly wanted to write downaquick comment so as to express gratitude to you for all of the amazing tactics you are posting on this website. My time consuming internet look up has finally been paid with reliable strategies to write about with my contacts. I would point out that most of us readers are undoubtedly lucky to live inadecent network with very many wonderful individuals with interesting points. I feel quite blessed to have come across your entire web pages and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks again for all the details. off white shoes
by sjmpjondv@gmail.com at June 04 2019
A lot of thanks for all of your efforts on this blog. Gloria enjoys making time for investigation and it is obvious why. My spouse and i learn all about the powerful medium you produce helpful guides via the website and even increase response from other ones on the theme so our favorite simple princess is actually becoming educatedalot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been doingauseful job. nike air max shoes
by ibwjahxesj@gmail.com at June 04 2019
A lot of thanks for all your efforts on this website. Debby takes pleasure in making time for investigations and it's really obvious why. Most of us learn all regarding the compelling tactic you convey vital tactics on this blog and as well as attract response from other ones on this subject while our favorite child is certainly being taughtawhole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You're doingatremendous job. balenciaga shoes
by zngtqhiv@gmail.com at May 31 2019
Thank you for all of the effort on this blog. My mother take interest in carrying out internet research and it's really easy to understand why. I notice all concerning the lively way you offer simple secrets through the web blog and foster contribution from some others on this concern so our favorite daughter has been learning so much. Take pleasure in the rest of the year. You're the one doingauseful job. ferragamo belt
by csgkyy@gmail.com at May 27 2019
I and my buddies have already been digesting the good points from your web page and all of the sudden developed an awful suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those strategies. All the guys had been certainly warmed to read them and have now really been using them. Many thanks for turning out to be well helpful and for pick out variety of magnificent themes millions of individuals are really eager to be aware of. My honest regret for not expressing appreciation to sooner. louboutin shoes uk
by vcpafwuu@gmail.com at May 23 2019
I simply desired to say thanks again. I'm not certain the things that I could possibly have implemented without those recommendations revealed by you about suchafield. Completely wasareal daunting situation in my opinion, however , finding out this specialised avenue you managed it made me to jump with gladness. I'm just grateful for the work and then hope you know whatagreat job you are always carrying out training some other people with the aid of your web site. I'm certain you have never got to know any of us. ferragamo belt
by gtwdyoyfj@gmail.com at May 22 2019
I'm writing to let you know whatafabulous discovery my wife's princess found viewing your webblog. She discovered several details, including how it is like to have an ideal helping spirit to let many people quite simply grasp various tricky things. You really did more than visitors' expectations. Thanks for producing these practical, trusted, explanatory and even fun tips about your topic to Ethel. goyard handbags
by bgrule@gmail.com at May 19 2019